मास्क खोल्न किन हतार ? - bampijhyala.com
Home > जीवन शैली > मास्क खोल्न किन हतार ?
१४ श्रावण २०७८, बिहीबार २३:१४ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । हामीलाई मास्क खोल्न हतार भइसक्यो । भीडभाड गर्ने मुड बनिसक्यो । जबकि कोरोना भाइरस ज्यूँका त्यूँ छ । यसबाट संक्रमित हुने र मृत्यु हुने क्रम पूर्णतः घटेको छैन । सुरक्षित र संयमित भएर आफ्नो दैनिक काम–व्यवहार गर्नु त पर्छ नै । तर, हामी कोरोनासँग खेलाँची गर्दैछौं ।
अमेरिकामा पुनः कोरोना भाइरस तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ८४ हजार बढी संक्रमित देखिएका छन् । जबकि त्यहाँ ४९ दशमलव ७ प्रतिशतले खोपको पूरा डोज लगाइसकेका छन् । तैपनि अमेरिकामा मास्क र भौतिक दूरीको आवश्यक्ता कायम छ ।
अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सीडीसी ले विद्यालयका बच्चा, शिक्षक र स्टाफलाई अनिवार्य मास्क लगाउन भनेको छ । सीडीसीले फ्लोरिडा र मिसौरीमा पूर्ण इम्युनाइज्ड व्यक्तिमा पनि डेल्टा भेरियन्ट फैलिएपछि मास्क अनिवार्य गरेको हो । अमेरिकामा डेल्टा भेरियन्टबाट संक्रमित हुनेहरु धेरै देखिएका छन् । छिमेकी भारतमा पनि यसको संक्रमण दर उच्च छ ।
तर नेपालमा धेरैले आफ्नो मुखबाट मास्क हटाइसके । भीडभाड बढ्न थाल्यो । यसले कोरोनाको जोखिमलाई अरु बढाइदिएको छ ।
हुन त कतिपयले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । यद्यपि कोरोना खोप लगाएकाहरुमा पनि यो संक्रमण फैलिने जोखिम भने कम छैन । सीडीसीका अनुसार खोप लगाइसकेका व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएको छ । रिसर्चले के पनि बताएको छ भने दुवै डोज खोप लिइसकेका मान्छेबाट पनि अरु व्यक्तिमा संक्रमण सर्ने जोखिम छ । सीडीसीले अमेरिकाको संक्रमित क्षेत्रमा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने जनाएको छ ।
संक्रमणबाट बच्न मास्क महत्वपूर्ण
कोरोना विरुद्ध खोप लगाइसकेपछि कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने भ्रम धेरैमा छ । त्यही कारण उनीहरुमा मास्क नलगाउने, भीडभाड गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जबकि, उनीहरुको माध्यमबाट पनि कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने अध्ययनहरुले देखाइसकेका छन् । अतः अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी भनेको भौतिक दूरी कायम राख्नु र मास्क लगाउनु नै हो ।
युनाइटेड फुड एन्ड कमर्सियल वर्कर्स इन्टरनेशनलका अध्यक्ष मार्क पेरोन भन्छन्( भाइरसबाट फैलिने संक्रमण रोक्ने एक मात्र उपाय मास्क हो ।
२२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:३१ bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं एजेन्सी । सामान्यतयाः लामो समयसम्म एउटै स्थानमा...
ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्रा अवधिभर काठमाडौँका भित्री क्षेत्रमा सवारी निषेध १४ श्रावण २०७८, बिहीबार २३:१४
निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा १४ श्रावण २०७८, बिहीबार २३:१४
सम्पादकियः विशेष आज असोज १, बाँपिझ्याला अनलाईन पत्रिका संचालनको एक बर्ष १४ श्रावण २०७८, बिहीबार २३:१४
पानी गौँथलीको ठूलो बथान भेटियो १४ श्रावण २०७८, बिहीबार २३:१४
सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय दाक्षि दँ १४ श्रावण २०७८, बिहीबार २३:१४